Fanamboaran-dalana etsy Tsarasaotra : Mpamily iray maty tsy tra-drano -
AccueilSongandinaFanamboaran-dalana etsy Tsarasaotra : Mpamily iray maty tsy tra-drano
Fanamboaran-dalana etsy Tsarasaotra : Mpamily iray maty tsy tra-drano
19/10/2018 admintriatra Songandina 0
Namoizana ain’olona ny fanamboaran-dalana. Olona iray namoy ny ainy vokatry ny fifandonana nateraky ny fiara Sprinter iray sy kamio teny Alarobia Tsarasaotra, omaly antoandro tokony ho tamin’ny 11 ora sy sasany tany ho any. Fandehanana mafy, ary sendra ity kamio mpitaona tany iray nanapaka lalana no nahatonga ny loza. Potika ihany koa ny fiara tra-doza. Fiara Sprinter iray mpitatitra ny mpiasan’ity orinasa ity, nifandona tamin’ny kamio iray mpitaona tany teo an-toerana. Araka izany tsy nisy mpandeha afa-tsy ny mpamily tao anatin’ity fiara “Sprinter” ity, saingy efa mpivezivezy eny an-toerana ka nandeha mafy. Nifanehitra tamin’ilay kamio avy hatrany ity farany, ka namoy ny ainy teo noho eo. Mafy ny fifandonana, ary tena nanano sarotra ny fisokirana ilay rangahy nisaofera ity fiara Sprinter. Tsy misy ahiana kosa ny ain’ilay mpamily iray hafa, raha ny tati-baovao taorian’ny nahatongavany teny amin’ny toeram-pitsaboana.
Niteraka fitohanana naharitra. Araka ny fitantaran’ireo nanatri-maso, samy nandeha mafy ny roa tonta izao nitera-doza izao. Azo lazaina ho tsy nifankahita ny andaniny vao afaka teo amin’ny fiholanana noho ny fandehanana mafy, hoy ny fanazavana voaray. Nipoitra tampoka ity sprinter ity, ka nidona tamin’ny vatan’ilay kamio. Tsy afaka noho ny haterin’ny lalàna kosa ny fiara iray hafa. Potika avokoa ireo fiara roa ary dia naratra avokoa ny mpamily ka tsy nisy nahatsiaro tena, saingy ity farany no tsy tana ny ainy. Nampandre ny manam-pahefana teny an-toerana ireo nanatri-maso. Ora vitsy ihany dia tonga nijery mivantana ny zava-nitranga kosa ireo mpitandro filaminana. Tamin’ny fotoana nahatongavan’ireo zandary nisahana ny raharaha vao natomboka ny fandaminana ny fifamoivoizana. Naharitra ora maro mihitsy vao niverina tamin’ny laoniny ny fitaterana sy ny savorovoro teny an-toerana, noho ny tsy fifanarahana teo amin’ny olona teny amin’ny manodidina. Fantatra fa niteraka olana tamin’ity tranga ity teny an-toerana mantsy ny vehivavy mpandika tenin’ireo sinoa tompon’ny lalana hamboarina io, izay tsy namela’ny olona mihitsy noho izy voatonona ho nanafina ny razana. Eo am-pelatanan’ny mpitandro filaminana ny raharaha.